(Please scroll down for Myanmar language)
I’m writing after the 73rd Session of the UN General Assembly, the 39th Session of the UN Human Rights Council and recent UN Security Council meetings on Myanmar, to share important reports, to recap our priorities, and reflect upon some key areas of work in relation to the UN’s peace, development and human rights agenda.
MYANMAR ON INTERNATIONAL AGENDA
Myanmar featured prominently in the above mentioned global meetings. The international community raised serious concerns over the atrocities in Rakhine State, and the ongoing conflicts in Kachin and Shan States. Within these summits, world leaders heldaseries of meetings in which the Government, the UN, civil society and Member States discussed their positions, particularly on sustainable solutions for Rakhine State, repatriation, accountability and humanitarian access.
Human rights were central to each of the consultations, and they will remain core to every one of our initiatives in Myanmar.
Please see belowalist of links to high level processes and decisions we need to reflect on as we continue to deliver our projects and programs.
UN Human Rights Council adoptedaresolution on 27 September which, among other things, “Decides to establish an ongoing independent mechanism to collect, consolidate, preserve and analyse evidence of the most serious international crimes and violations of international law committed in Myanmar since 2011.”
The Fact-finding Mission on Myanmar issued on 18 Septemberareport calling “for the investigation and prosecution of Myanmar’s Commander-in-Chief, Senior General Min Aung Hlaing, and his top military leaders for genocide, crimes against humanity and war crimes.”
UN Resident and Humanitarian Coordinator ai Knut Ostby issuedaStatement on3September on the verdict in Reuters case: “We are disappointed by today’s court decision. The United Nations has consistently called for the release of the Reuters journalists and urged the authorities to respect their right to pursue freedom of expression and information.”
UN Security Council heldameeting on Myanmar on 28 August where the Secretary-General said in his Opening Remarks: “Some 130,000 Rohingya remain confined in camps with severe restrictions on their freedom of movement. They have extremely limited access to health, education and other essential services, and to ways of makingaliving.”
I encourage you to read through these documents as well as Minister U Kyaw Tint Swe’s address to the UN General Assembly from 28 September in which he said “Human rights and inclusiveness are fundamental to the successful transformation of Myanmar intoademocratic society.
Let me turn now to our priorities in light of these significant developments as they relate to our operations and advocacy.
Our objective is to serve people of all communities in Myanmar, irrespective of ethnicity, religion or citizenship status -- in line with the 2030 Sustainable Development Agenda, the Myanmar Sustainable Development Plan, and the international human rights principles and humanitarian priorities.
To achieve this objective, we will continue to provide assistance to the peace process, economic transformation and political transition. Accountability must be part of the solution for Myanmar.
Our work will be guided by an approach of constructive and principled engagement, as entrusted by the leadership of the UN system. This includes, as you know,ahuman rights-based approach to all programming. We will make sure each of our activities meets international standards and we will remain engaged in public advocacy on strategic issues. We will continue to cooperate with the Government, community leaders and CSOs, international community, academia, private sector, the media, local and international NGOs – and the UN system, specifically the UN Special Envoy of the Secretary-General for Myanmar, the OHCHR and other agencies.
Maintain the momentum for the transition: We will continue to support the three transitions – from conflict to peace, the democratic transition, and the transformation fromaclosed to an open economy. UNDP’s Civil Service Reform Strategic Action Plan will improve service delivery, reduce corruption and enhance inclusion in the civil service. UNICEF, UNHCR, ILO and RCO have achieved the release of 900 child soldiers since 2012. UNODC helped the Government to launchanew drug policy. UNOPS-managed programmes have been supporting 56 financial institutions that collectively reached 2.1 million clients. Each step of our development work must continue to be guided by human rights principles
Save lives now: We have achieved some progress in opening humanitarian access, for example in Maungdaw area, but people in need still cannot access humanitarian assistance in parts of Kachin, Shan and Rakhine States. We will continue to advocate for free, timely, safe and unimpeded access in coordination with the Special Envoy, partners in Myanmar and in Headquarters.
Sustainable solutions for Rakhine, Kachin and Shan States: We have developed with partnersaStrategic Framework for International Engagement in Rakhine; signed and initiated work under the Memorandum of Understanding between the Government, UNDP and UNHCR; and seven UN agencies launched projects underaUS$ 20 million grant from Japan. As the next step, I will focus on working with you and the Government on sustainable solutions for the IDPs and implementation of the Rakhine Advisory Commission’s recommendations. Work has started to prepareaStrategic Framework also for Kachin and Shan States.
Human rights advocacy: The UNCT Human Rights Theme Group is preparingahuman rights strategy, strengthened Human Rights Up Front Action and internal capacity building. We have provided support to human rights mechanisms, such as OHCHR, the Fact-finding Mission, the Special Rapporteur on Human Rights, the Special Representative of the Secretary-General on children and armed conflict and on sexual violence in conflict, CEDAW, as well as work on prevention of sexual harassment and exploitation. UNDP and OHCHR are working onaproject to strengthen the National Human Rights Commission. We are going to address several of the recommendations of the Fact-finding Mission. More on this soon
I look forward to working with you on supporting the reform processes, humanitarian operations and human rights agenda in the critical times ahead of us.
လေးစားရပါသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များခင်ဗျာ -
၇၃ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ၃၉ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးနှင့် မကြာမီက မြန်မာနိုင်ငံအရေး ဆွေးနွေးရန် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးများအပြီး အရေးကြီးသော အစီရင်ခံစာများကို မျှဝေပေးရန်၊ ကျွန်တော်တို့ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်တင်ပြရန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဓိကလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အချို့ကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် ဤစာကို ရေးသား လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများတွင် မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို အလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောလုပ်ရပ်များ၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် များတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးများကျင်းပနေစဉ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များသည် အစည်းအဝေး များ ဆက်တိုက်ကျင်းပခဲ့ကြပြီး အစိုးရ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက် အနေအထားများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ရေရှည်ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်း၊ ရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီများအား လက်လှမ်းမီရရှိမှုတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးမှုတိုင်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးများကို အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး လူ့အခွင့်အရေးများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွန်တော်တို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်တိုင်းတွင်လည်း အဓိက ဆက်လက် ပါဝင်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အရေးကြီးသော ဖြစ်စဉ်များနှင့် ထုတ်ပြန်ချက်များ
ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ စီမံချက်များနှင့် အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် သုံးသပ် ဆင်ခြင်ရန် လိုအပ်သည့် အဆင့်မြင့်ပိုင်းမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်မည့် link များစာရင်းကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသည် “၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကြီးလေးသောနိုင်ငံတကာပြစ်မှုများနှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုများ၏ သက်သေအထောက်အထားများကို စုဆောင်းခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်သွားမည့် သီးခြားလွတ်လပ်သောယန္တရားတစ်ခုကို တည်ထောင်ရန်” ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုအား ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်သည် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အစီရင်ခံစာ တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ထိုအစီရင်ခံစာတွင် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ၎င်း၏ ထိပ်တန်းစစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များအား လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အရပ်သားများအပေါ် ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးကာ တရားစွဲဆိုရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။”
ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး (ယာယီ) ကနွတ်အော့စ်ဘီက ရိုက်တာသတင်းထောက်များအမှု စီရင်ခံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ခုထုတ်ပြန်ရာတွင် “ယနေ့ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ပျက်မိပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေဖြင့် ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား လွှတ်ပေးရန် အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ရယူပိုင်ခွင့်အား လေးစားရန် အာဏာပိုင်များအား တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။”
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ရာ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ၎င်း၏ အဖွင့်အမှာစကားတွင် “ရိုဟင်ဂျာ ၁၃၀,၀၀၀ သည် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားသော စခန်းများတွင် နေထိုင်နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အခြားသော အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို လက်လှမ်းမီရန် အလွန်ခက်ခဲ့သော အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်း” ပြောကြားသွားပါသည်။
အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် ပြောကြားခဲ့သော ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၏ မိန့်ခွန်း တို့ကို ဖတ်ရှုကြရန် အားလုံးကို တိုက်တွန်းလို ပါသည်။ ဦးကျော်တင့်ဆွေက ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းတွင် “မြန်မာနိုင်ငံအား ဒီမိုကရေစီလူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် အောင်မြင်စွာ အသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုသည် အခြေခံကျသည်” ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါသည်။
အဆိုပါ အရေးကြီးသော ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများသည် ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက် နေမှုများ၊ စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်နှင့်အညီ ကျွန်တော်တို့၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးလိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၂၀၃၀ လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအခြေခံ စည်းမျဉ်းများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအားလုံးကို လူမျိုး၊ ဘာသာ မရွေး၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအခြေအနေတို့ကို ပဓာနမထားဘဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဤရည်ရွယ်ချက် ပြည့်မြောက်စေရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှုများအတွက် အကူအညီများဆက်လက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အဖြေရှာရာ တွင်တာဝန်ခံမှုသည် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ပါဝင်ရပါမည်။
ကုလသမဂ္ဂစနစ်၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ ယုံကြည်အပ်နှံထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ငန်းများ အား အပြုသဘောဆောင်ကာ ချမှတ်ထားသောမူများကိုလည်းအခြေခံသောဆောင်ရွက်မှု ပုံစံဖြင့် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်ကြ ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် အားလုံးသိထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့၏ အစီအစဉ်များ အားလုံးကို လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေပြုသည့် ပုံစံဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းသည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီ စေရမည်ဖြစ်သလို မဟာဗျူဟာကိစ္စရပ်များအား အများပြည်သူထံ အသိပေး တင်ပြဆွေးနွေးမှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အစိုးရ၊ ရပ်ရွာခေါင်းဆောင်များနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၊ ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၊ မီဒီယာ၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ NGO များ၊ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ OHCHR နှင့် အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂစနစ်တစ်ခုလုံးနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ဦးစားပေးနယ်ပယ်များထဲတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည် -
အသွင်ကူးပြောင်းမှု အရှိန်အဟုန်မပျက်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း - ကျွန်တော်တို့သည် ပဋိပက္ခမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် တံခါးပိတ်စီးပွားရေးမှ တံခါးဖွင့်စီးပွားရေး သို့ ကူးပြောင်းမှုသုံးမျိုးအတွက် ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားပါမည်။ UNDP ၏ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံချက်သည် ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးမှုကိုတိုးတက်စေပြီး အဂတိလိုက်စားမှုကို လျှော့ချကာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွင်း အားလုံးပါဝင်မှု ကို ပိုမိုမြင့်မားလာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ UNICEF ၊ UNHCR ၊ ILO နှင့် RCO တို့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကလေးစစ်သားပေါင်း ၉၀၀ကို စစ်တပ်မှ ထွက်ခွင့်ရရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ UNODC သည် အစိုးရအား မူးယစ် ဆေးဝါးမူဝါဒသစ်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်နိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ UNOPS မှ စီမံခန့်ခွဲသော အစီအစဉ်များသည် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း ၅၆ ခုကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ထိုအဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်း၍ ဝန်ဆောင်မှု ရယူသူပေါင်း ၂.၁ သန်းကို ဝန်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းများ၏ အဆင့်တိုင်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသက်များကို ကယ်ဆယ်ခြင်း - ကျွန်တော်တို့သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ ပေးအပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ ဥပမာ မောင်တောဒေသတွင်၊ တိုးတက်မှု အချို့ ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်များရှိ နေရာဒေသအချို့တွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ လိုအပ်နေသူများသည် အကူအညီများကို လက်လှမ်းမီခြင်း မရှိကြသေးပါ။ ကျွန်တော်တို့သည် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူး ကိုယ်စားလှယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိတ်ဖက်များ၊ ဌာနချုပ်ရှိ မိတ်ဖက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ကာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအား အဟန့်အတားမရှိ လွတ်လပ်၍ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အချိန်မီ လက်လှမ်းမီ ရရှိနိုင်ရေး အတွက် ဆက်လက်စည်းရုံးဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ် အတွက် ရေရှည်တည်တံ့မည့် အဖြေများ - ကျွန်တော်တို့သည် မိတ်ဖက်များနှင့် အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံတကာမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းများအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် မူဘောင်တစ်ခုကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး အစိုးရ၊ UNDP နှင့် UNHCR ကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ရေးထိုးကာ လုပ်ငန်းများ အစပျိုး ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း ခုနစ်ခုသည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကူညီသော ရန်ပုံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ဖြင့် စီမံချက်များကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် အစိုးရနှင့်အတူ IDP များအတွက် ရေရှည်တည်တံ့မည့် အဖြေများရရှိရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေး အတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ နှင့်အတူ ဦးတည် လုပ်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များအတွက်လည်း ဗျူဟာမြောက် မူဘောင်တစ်ခု ပြင်ဆင်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်သည်။
လူ့အခွင့်အရေးများအတွက် စည်းရုံးလုပ်ဆောင်ခြင်း - UNCT လူ့အခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာအုပ်စု (UNCT Human Rights Theme Group) သည် Human Rights Up Front Action လုပ်ဆောင်ချက် အားကောင်းစေရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်း စွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးတို့ အတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဗျူဟာတစ်ခုကို ရေးဆွဲနေပါသည်။ OHCHR ၊ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ ကလေးများနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများဆိုင်ရာနှင့် ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ CEDAW ကဲ့သို့သော လူ့အခွင့်အရေးယန္တရားများကို ကျွန်တော်တို့ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သလို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှုနှင့် အမြတ်ထုတ်မှုများ တားဆီးကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ UNDP နှင့် OHCHR တို့ ပူးပေါင်းကာ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် စီမံချက်တစ်ခုကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် အချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်၏ အကြံပြုချက် အချို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကြာမီ ထပ်မံအသိပေးပါမည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ရှေ့တွင် စောင့်ကြိုနေသော အရေးကြီးသည့် အချိန်ကာလများအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် တို့ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် အားလုံးနှင့်အတူ လက်တွဲ ဆောင်ရွက် သွားကြဖို့ မျှော်လင့်ပါသည်။